सुर्खेत बहुउद्देश्यीय सहकारीको नाफा ३० लाख « Sahakari Nepal
सुर्खेत बहुउद्देश्यीय सहकारीको नाफा ३० लाख
प्रकाशित मिति : 16 January, 2018 12:56 pm
सुर्खेत । सुर्खेत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. वीरेन्द्रनगर ६ सुर्खेतको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३० लाख नाफा गरेको छ । संस्थाको सोह्रौँ वार्षिक साधारणसभा संस्थाका अध्यक्ष गणेशकुमार बस्नेतको अध्यक्षतामा र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालका सञ्चालक पदम दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो ।
साधारणसभामा संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष बस्नेतले २०५८ साल श्रावण ३० गतेका दिन दर्ता भएको संस्थाले हाल १५७३ जना सदस्य आवद्ध हुनुहुन्छ भने यस वर्ष मात्र ४२५ जनाले कर्जा सेवा लिनु भएको छ, मुख्य कार्यालयमा ९ सेवाकार्यालय ४ जना र विद्यालयमा ७० जना गरी ८३ जना लाई पत्यक्ष रोेजगारी प्रदान गरेको छ भने संस्था र विद्यालयका लागी आफ्नै भवन निर्माण समेत भैरहेको जानकारी अध्यक्षले दिनुभएको थियो ।
संस्थाले ४ करोडको शेयर पुजी र बचत परिचालन गरी यस वर्ष रु ३१ करोडको कारोवार गरेको छ । संस्थाका कोषाध्यक्ष सुरेशबहादुर गौतमले ६ लाख बढी कर चुक्ता गरेको प्रस्तुत गरेका बताउनुभएको थियो । २०७४÷०७५ का लागी २७ वटा कार्यक्रम सहित पेस गरेका गर्नुभएको थियो । लेखा सुपरिवेक्ष समितिका सयोजक राजन गौतमले संस्थामा भएका सकारात्मक कार्यको जानकारी र सुझाव सहीतको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो ।
साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि पदम दाहालले संस्थाले शेयर सदस्यको विश्वास जिति समाजमा सहकारी संस्थाले आफ्नो साख बढाउन सकेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । रोजगारी सृजनामा पनि काम गरेकोमा धन्यवाद दिदै अब अहिले आएको नयाँ सहकारी ऐनलाई अध्यान गरी ऐन नियमको पालना गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहकारीहरुमा दुर्घटन नआउने र सहकारीका सञ्चालक शेयर सदस्यहरु कसैले डराउन नपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघको सञ्चालक डिलर भट्राई, सहकारी बैँकका नरेन्द्र योगी, बरिष्ठ अधिबक्त भुषण मान्नधर, बरिष्ठ सल्लाहाकार धुर्ब श्रेष्ठ लगायतले शुभकामना दिनु भएको थियो । संस्थाका सञ्चालक दिपेन्द्र कुमार ढकालले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य पुर्ण नेपालीले गर्नुभएको थियो ।
साधारणसभाले गणेश कुमार बस्नेतको अध्यक्षतामा आगमी ४ वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ ।